Miciishada degmada Marka oo kor u kacaday saameynta ku yeelaty cunaqabateynta Al-shabaab – Walaal24 Newss
Miciishada degmada Marka oo kor u kacaday saameynta ku yeelaty cunaqabateynta Al-shabaab
April 5, 2019	0	By walaal24
Dadweynaha ku nool magaalada Marka ayaa dhib ku qaba iska hor’imaadyada oo sababaya dagaalada u dhaxeeya Ciidamada Dowlada iyo Kooxda Al-shabaab ay qolo walba ay dooneyso gacan ku haynta magaalada.
Waxaa Marka kusoo noqnoqda hardan u dhaxeeya ciidamada dawlada iyo kooxda Al-Shabaab, arrintan ayaana sababtay in miciishaddu ay kor u kacdo, kadib markii ay cunaqabatayn ku soo rogeen kooxda Al-Shabaab.
Kooxda Al-shabaab ayaa uga digtay dadka ku nool gobolka Shabeellada Hoose in aysan wax xiriir ganacsi ah la samayn deegaannada ay maamusho dawladdu oo ay Marka ka mid tahay.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in ay jiraan dhibaatooyin ay wajahayaan dadweynaha isku daya in ay dhaqdhaqaaq ganacsi sameeyaan, halka dhanka kalena ay shacabku dhibaato ku qabaan sicir barar baahsan, waxaa aad u qaaliyoobay dhammaan adeegyada kala duwan ee lagama maarmnaanka u ah nolosha.
Dhawaan kooxda Al-shabaab ayaa rasaas ku furtay kalluumeysato doon wadatay, hal qof ayaana ku dhintay weerarkaas oo ka dhacay inta u dhaxeysa Jilib, Gendarshe iyo Marka., sida uu sheegay guddoomiyaha Marka.
Wararka laga helayo shabeellada Hoose ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay dileen labo nin oo ganacsato ah oo ay u rarnaayeen laba gaadhi oo raashin u siday magaalada Marka, ka dib markii ay u galeen waddada u dhaxeysa magaalooyinka Janaale iyo Buufoow.
Guddoomiyaha magaalada Marka Cabdullaahi Cali Axmed ayaa ka waramay sababta keentay sare u kaca maciishadda wuxuuna yidhi: “Ka dib markii ay waddada xeebta marta ay xirantay, iyagana waxay ku dhawaaqeen in ay xirantahay waddada kale ee xagga Janaale soo marta, muddo 5 illaa 6 maalmood ka hor ayay arrintaas dhacday”.
Ciidamada Xooga oo hawlgallo ka sameyay deeganada Jiinka Wabiga ee hoos taga degmadda Jamaamme
Magaalada Muqdisho oo maanta lagu qabtay tartanka Cayaaraha fudud ee Orodka gaaban
Dawlad Gobaleedka Hir-shabeelle oo dardar ku billaawday qabsoomidda shirarka Tubaha Qaranka
Taliyaha Qeybta 43-Aad ee Xooga oo sheegay in la xoojiyay howlgalada ka socda Jubbada Dhaxe
Dowladaha Jabuuti iyo Ertetrea oo gaaray heshiis horu-dhac ah
Qasaarihii ka dhashay weerarkii kadhacay Masaajidada ku yaala Dalka New Zealand oo kordhay
Madaxweyne Farmaajo oo soo gabagabeeyay booqashadii uu ku joogay dalka Koonfur Afrika
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka oo Turkiga uga qayb galay Xuska Maalinta Caalamiga ah ee la dagaallanka nabaad guurka Deegaanka
Daawo: Madaxweyne Dani “Waxaan ka digeyaa cid kasta oo ka timaaday meel kale dalka gudihiisa iyo dibadaba………..